အသုံးစက်ရုပ်၏ဘုရင်မကြီးတွေ့ဆုံရန် - သတင်း Rule
ဆှီဒငျတီထွင်သူ, '' shitty စက်ရုပ်၏မိဖုရား '' ဟုခေါ်တွင်, သီးနှံအစာစားခြင်းသို့မဟုတ်နှုတ်ခမ်းနီလျှောက်ထားများအတွက်သူမ၏ဇာတ်ဆောင်ပစ္စည်းနှင့်အတူနောက်လိုက်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ဆွဲဆောင်ခဲ့သည်
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “အသုံးစက်ရုပ်၏မိဖုရားတွေ့ဆုံရန်: '' အင်တာနက်တစ်လိုက်တယ်နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည် ''” Amber Jamieson ကရေးသားခဲ့သည်, theguardian.com ကြာသပတေးနေ့ 17 မတ်လအပေါ်များအတွက် 2016 16.11 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
"shitty စက်ရုပ်၏မိဖုရား" အဖြစ်လူသိများ, ဆွီဒင်တီထွင်သူဆီမှ Giertz နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုများနှင့်အတူကူညီပေးဖို့စက်ရုပ်ဆောက် - မှလွဲ., သူတို့အလုပ်မလုပ်ပါဘူး. ကောင်းစွာ, နည်းစနစ် သူတို့လှလှပပအလုပ်လုပ်, ဒါပေမဲ့သူမ၏စက်ရုပ်ငါတို့အသက်အမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှအစိတ်အပိုင်း automated ခင်ကြှနျုပျတို့သညျသှားဖို့ခဏတစ်ရရှိပါသည်ပြသ.
စတော့ဟုမ်းအတွက် houseboat ရက်နေ့တွင် 25 နှစ်အရွယ်ဘဝနှင့်အတူမြင့်မားအောင်မြင်ယူကျု့ချန်နယ်ပြေး 124,000 subscribers, သူမရဲ့လွန်ပြီးအိမ်မက်ဆန်နှင့် Hilary ပစ္စည်း၏ဗီဒီယိုများရေးသားဘယ်မှာ, ထိုကဲ့သို့သောသူမ၏သီးနှံအစာကျွေးဖို့စက်ရုပ်အဖြစ်, သူမ၏နှုတ်ခမ်းနီပေါ်တွင်တင်နှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များခုတ်.
သူမရဲ့လတ်တလောဗီဒီယို - တစ်ဦးခေါင်းကိုကီးဘုတ်ဆန့်ကျင်အကြိမ်ကြိမ်ကန်ပြီး - အင်တာနက်ပေါ်ငြင်းခုန်ကူညီဖို့ဖြစ်ပါတယ်.
သူမဟာ Self-ဆုံးမသွန်သင်အချိန်ပြည့် shitty စက်ရုပ်ဖန်တီးသူဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကိုဂါးဒီးယန်းနှင့်အတူစကားပြော.
ငါ့မိတ်ဆွေယောနသန်သည်Lönnqvistငါဖန်ဆင်း ဒီ iPhone ကိုအမှု ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးရန်ဂစ်တာကြိုးနှင့်အတူ. ပြောစရာမလိုတော့ပါဘူး, တကတော်တော်လေးရည်မှန်းချက်ကြီးပထမဦးဆုံးဟာ့ဒ်ဝဲစီမံကိန်းကိုခဲ့သည်. အမျိုးအစား "shitty စက်ရုပ်" အောက်မှာကျရောက်ကြောင်းငါဖန်ဆင်းပထမဦးဆုံးတဦးတည်းကဒီခဲ့ သွားပွတ်တံထုပ်.
ငါရှေ့ပြေးပုံစံလိုအိုင်ဒီယာတွေအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်သောကြောင့်. ငါ့ကိုရန်, အတွေးအခေါ်များသူတို့ကိုငါတည်ဆောက်မယ့်တစ်ချိန်ကသာသွားကြောင်းနှောင့်အယှက် salespeople ကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏.
သငျသညျကောလိပ်မှာရူပဗေဒလေ့လာပေမယ့်အဓိကအားဖြင့် Self-ဆုံးမဩဝါဒပေးစက်ရုပ်၌ရှိကြ၏. သင်ဘယ်လိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုသင်ပေးခဲ့?
ပစ္စည်းပစ္စယကိုတည်ဆောက်ခြင်းအားဖြင့်! အကြှနျုပျ၏သင်ယူမှုလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအစဉ်အမြဲအလွန်စိတ်ကူး-oriented ခဲ့. ငါစာအုပ်တစ်အုပ်တူဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူထိုင်နေဘယ်တော့မှ, "အိုကေ, ယခုငါစစ္အကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူသွားတာပါ။ "ငါကတည်ဆောက်ဖို့ဘယ်လိုထွက်တွက်ဆဖို့ကြိုးစားနေခဲ့အဖြစ်မယ့်အစားငါတကယ်ကြိုက်တယ်ထားတဲ့စိတ်ကူးခဲ့သင်ယူ.
အဘို့အလှုံ့ဆော်မှုဘာ အင်တာနက်အငြင်းပွားမှုများနှင့် ပတ်သက်. သင့်ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ်ဗီဒီယို?
ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်, တဘို့အကြှနျုပျ၏အလှုံ့ဆော်မှုခဲ့သည်: "သူကပြောတယ်အိုး, ငါ။ ယခုအပတ်အဘို့အဗွီဒီယိုတစ်ခုလိုအပ်ပါတယ် "ပြီးတော့ငါငါ့အဆွေငါရရှိသမျှကိုလက်ထပ်ထိမ်းမြားအဆိုပြုချက်များအတွက် facerolling စက်ရုပ်လုပ်သင့်ကြောင်းမှတ်ချက်ပေးခဲ့ကွောငျးကိုအောကျမေ့. facerolling ကြောင့်ရှေ့တော်၌အရာကြီးမသိခဲ့ပါ. အင်တာနက်ဟာလိုက်တယ်နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်.
တကယ်ပဲမူတည်. ငါပွုစီမံကိန်းတချို့ကပဲငါ့ကိုစက်ရုပ်လက်မောင်းကို programming နေကြတယ်, အနှုတ်ခမ်းနီစက်ရုပ်များကဲ့သို့, အနံနက်စာစက်နှင့် facerolling စက်ရုပ်. သူတို့သညျအလုပျတခုမွန်းလွဲပိုင်းကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏. အခြားစီမံကိန်းများ, ထိုလက်ခုပ်သံများစက်တူ, ဖြစ်နိုင်တစျနှစျခုမှပတ်အချိန်ပြည့်ရှိပါတယ်.
ဒါကြောင့်ဇာတ်ဆောင်နှင့် creepy ၏ပြီးပြည့်စုံသောပေါင်းစပ်လို့ငါလက်ခုပ်သံများစက်ကြိုက်တယ်. ငါကအခြားရက်သတ္တပတ်ကတင်ဆောင်လာသောဘတ်စ်ကားကိုစီးနှင့်လူများကတုံ့ပြန်စောင့်ကြည့်အဖိုးမဖြတ်နိုင်ခဲ့.
အဲဒါဟုတ်ပါတယ်! အကြှနျုပျ၏အလုပ်ယခုအချိန်အထိတစ်ဦးသံသယဘဲငါအကောင်းဆုံးတီထွင်မှုသည်. ကိုယ့်ကိုယ့်ခဲ့တယ်အားလုံးပုံမှန်အလုပ်အကိုင်အကြှနျုပျ၏လှုံ့ဆျောမှုသေဆုံးခဲ့ပြီဟုသဘောပေါက်. အစဉ်မပြတ်ငါကိုယ့်ခက်ခဲကိုယ့်ကိုကိုယ်တွန်းအားပေးနှင့်ကသို့ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပိုတင်ပါကပိုပြီးပျော်စရာဖြစ်လာချင်ပါတယ်ထင်, ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုယ်စီမံကိန်းများအပေါ်အလုပ်လုပ်ခဲ့သောအခါကဲ့သို့တူညီသောမီးပွားမရနိုင်. ဒါကြောင့်ငါသည်ငါ့မဟာဗျူဟာပြောင်းလဲအစားတကယ် fit မပြုခဲ့တဲ့မှိုသို့ကိုယ့်ကိုကိုယ်တွန်းအားပေးရန်ကြိုးစားနေ, ငါမင့်မှိုကိုပြောင်းလဲဖို့ကြိုးစားစဉ်းစားထား. ငါဆန်ဖရန်စစ္စကို၌ငါ့အလုပ်ထွက်, နောက်ကျောစတော့ဟုမ်းပြောင်းရွှေ့, အပေါ်နေထိုင်ခဲ့ 0.5 အချက်အလက်များ၏ GB ကိုတစ်လပဲပစ္စည်းပစ္စယအပေါ်လုပ်ကိုင်ဖို့တတ်နိုင်သမျှအချိန်အထိပြန်လွှတ်ဖို့ကြိုးစားငါပျော်စရာထင်. ဒါဟာအမှုအရာသူတို့ရှိသည်လမ်းပိတ်ထားယူမယ်လို့သောငါ၏အစီအစဉ်ကိုဘယ်တော့မှခဲ့သည်, ကိုယ့်ကိုယ့်အကြောင်းကိုစိတ်အားထက်သန်ခဲ့သည်ပစ္စည်းပစ္စယပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်ချင်တယ်, နှင့်ပုံကတခြားလူလည်းသူတို့ကိုအကြောင်းကိုစိတ်အားထက်သန်ခဲ့ကြ!
လျှို့ဝှက်ချက်! ဒါဟာငါ့အအကြီးမားဆုံးသည်ရုပ်တုတို့နှင့်တယောက်နှင့်အတူတစ်ပူးပေါင်းဖွင့်ခြင်းနှင့်ငါကသေး, ငါ၏အကောင်းဆုံးတယောက်ဖြစ်သွားမယ့်ထင်. မတ်လရဲ့အဆုံးမှာတစ်ချိန်ချိန်မှာထုတ်ဖြစ်လိမ့်မည်!
သငျသညျသေးများအတွက်အချိန် / ကျွမ်းကျင်မှု / ပိုက်ဆံရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးကြောင်းကိုသင်၏အိပ်မက်စက်ရုပ်စီမံကိန်းကိုဘာလဲ?
တစ်ဦးရေငုပ်သင်္ဘော houseboat. ငါအဟောင်းဆှဲသငျေ်ဘာပျေါတှငျနထေိုငျကားရေငုပ်သင်္ဘောရှိခြင်းလာမည့်အဆင့်အထိဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ခံစားမိ.
အဘယ်သူမျှမ, ကျိန်းသေမ. အနုပညာငါ့ကို scares. ငါအနုပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်ဖို့လုံလောက်တဲ့အအေးခံမခံစားရဘူး.
23706	4 ပယင်း Jamieson, အပိုဒ်, အင်္ဂါရပ်များ, စက်ရုပ်, နည်းပညာ, YouTube ကို
← အဆိုပါအများစုဟာအသုံးဝင်သော, -ရှိရမည်တဲ့ Car တွင်အင်္ဂါရပ်များ [RANKER] အဆိုပါ 25 အားလုံးအချိန်အခက်ခဲဆုံးဗီဒီယိုဂိမ်းများ →